थम्पसन र वाम्बो, धेरै तातो शरद forतुका लागि धेरै कालो क्लासिक्स वर्तमान साहित्य
यो गिरावट कुनै राम्रो भइरहेको छैन। खडेरीले आधा स्पेनको भूमि ओगट्छ। उत्तरपश्चिम आगोको ती चराहरू हुन् जुन केही हार्दिक मानिसहरूले सुन्दर गालिसियन र अस्थेनी क्षेत्रहरूमा राखेका छन्। उत्तरपूर्वमा, सामान्य आत्माहरू पनि केही समयको लागि तताइरहेका छन्। र क्षितिजमा बादल नभएर वातावरण ताजा गर्नुहोस्। हो, कालो पाठक को कालो कल्पना को लागी शुभ पल। र कुन भन्दा राम्रो तरिका लाई हेर्नका लागि अधिक शीघ्र क्लासिक्स.
जिम थॉम्पसन र जोसेफ वम्बोभ दुईवटा नाम हुन् धेरै प्रशंसित र सम्मानित उत्तर अमेरिकी अपराध उपन्यास विशेष रूपमा तर सामान्यमा पनि। प्रभाव एन्जेलिनो जस्तो शैलीको अन्य ग्रिट्सको जेम्स ellroy वा viking जो नेस्बे पुरानो युरोपमा, विधाको कुनै पनि स्वाभिमानी प्रेमीले उसको एउटा रचना पढेको हुनुपर्छ। आज म उनको सबैभन्दा प्रतिनिधि को एक जोडी समीक्षा गर्दछु।
1 जिम थामसन
1.1 २० आत्माहरू
1.2 मेरो भित्रको हत्यारा
2 जोसेफ वाम्बो
2.1 नयाँ शताब्दी
2.2 हलिउड स्टेशन
कथा भन्नका लागि बत्तीस तरीका छन् र मैले ती सबै प्रयोग गरेको छु, तर त्यहाँ केवल एउटा षडयन्त्र छ: चीजहरू ती जस्तो देखिदैनन्।
(अनाडार्को, ओक्लाहोमा, १ 1906 ०1977 - हन्टिंगटन बीच, क्यालिफोर्निया, १ XNUMX .XNUMX) थमसन समयको अन्तरालमा उसले मान्यता पाएको हो कि ऊ मरे। केहीले यो शैलीको अमेरिकी होली ट्रिनिटीमा राखे चान्डलर y Hammett आकार उहाँसँग एक प्रशंसनीय काम को लेखक थिए Nove उपन्यास प्रकाशित र अझ अप्रकाशित। यो मा एक महान घटक छ आत्मकथा (उनी एक भ्रष्ट शेरिफको छोरो थिए जो मेक्सिकोमा भाग्नुपर्‍यो र आत्महत्या गरे।)
उसले २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने कोखहरूको चित्रण गरे रक्सी। उनी साह्रै आफ्नो साहित्यमा बाँचिरहेका थिए, तर उनले आफ्नो अखबारका लेखहरूमा गरे। उनले आफ्नो प्रकाशित गरे novel years बर्षको पहिलो उपन्यास र उनले डेढ बर्षमा १२ लेखेका थिए। उनी सिनेटका जोसेफ म्याकार्थीको कमिसनको बोक्सी हन्टको क्रसहेर्समा पनि थिए जुन उनको १ 12 .१ मा निन्दा गरिएको थियो।
उसका मास्टरपिसहरू बीच दुई शीर्षक जस्तै हुनुपर्दछ, तर पनि जंगली रात o भाग्न, अरु मध्ये। उनले दुई मध्ये दुई जनालाई पनि हस्ताक्षर गरे लिपिहरू सबैभन्दा प्रसिद्ध शट द्वारा स्टेनली कुबिक सिनेमाको अन्य दुई उत्कृष्ट कृतिहरूमा, उत्तम heist y महिमाको पथ.
निक कोरी एउटा सानो अमेरिकी शहरको विशिष्ट कमिसरी जस्तो देखिन्छ मधुरो र धेरै अस्पष्ट, तर वास्तवमा के त्यो चलाख हो कि मूर्ख हो जस्तो लाग्छ। त्यो बुद्धिमत्ता वरपरका लागि वास्तविक खतरा हो। थप रूपमा, उसका सबै कार्यहरू अरुको लागि परिणामहरूको बारेमा वास्ता नगरी आफ्नै फाइदाको लागि हो। थम्पसनको बुद्धिमान चाल यो हो कोरीले हामीलाई मन पराउँदा अन्तमा मान्छे जस्तो निर्दयी र निर्दयी र हामी चाहन्छौं कि उनले निर्वाचनमा कमिश्नरको बिरूद्ध आयुक्तको लागि जितेको हो जुन इमान्दारिताको मान्छे हो।
मेरो भित्रको हत्यारा
मा लेखिएको 1952, सेन्ट्रल सिटी मा शान्त जीवन बताउँछ, पश्चिम टेक्सास मा एक तेल शहर। त्यहाँ डिप्टी शेरिफ लू फोर्ड, जसलाई सबै शान्तिमय र मायालु मानिस मान्थे, फेरि रोग लाग्यो "रोग" जुन उनलाई बनायो अपराध गर्नु उसको जवानीमा। त्यसबेलादेखि लू चाहन्थ्यो सामान्य देखिन्छ अन्य चीजहरूमा, उदाहरणका लागि, एमी स्ट्यान्टनसँग उनको सम्बन्धमा, उहाँ जस्तो राम्रो परिवारकी एउटी केटी। तर सबै कुरा एक रक्खै सर्वनाश को नेतृत्व गर्नेछ।
यो एक भयो २०१० मा फिल्म अनुकूलन द्वारा निर्देशित माइकल विन्टरबॉटम र तारांकित केसी एफिलेक, केट हडसन र जेसिका अल्बा.
वाम्बुको उपन्यासहरूले मेरो जीवन बचायो। जेम्स ellroy
Wambaugh turned० बर्ष भएको छ यस वर्ष जनवरी पुलिस छोरा, उनले १ 17 वर्षको उमेरमा मरीनहरूमा भर्ना गरे। चाफे कलेजबाट स्नातक गरे पछि उनी यस विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे LAPD १ 1960 .० मा, जसमा उनले चौध वर्ष बिताए र पुगे जासूस सार्जेंट। उहाँ धेरै उपन्यासहरूको लेखक हुनुहुन्छ जसमा फिक्शन र वास्तविकता मिश्रित छन्। ती मध्येका पनि छन् प्याज क्षेत्र o निलो नाइट.
यो उनको पहिलो उपन्यास हो र १ 1971 .१ मा प्रकाशित भएको थियो। यसले हामीलाई बताउँछ लस एन्जलसका तीन पुलिस अधिकारीहरूबाट पाँच वर्षको प्रशिक्षुता साठोत्तरी समयमा। यस समयमा, तिनीहरूले लुटाहरूको अनुसन्धान गर्छन् र वेश्याहरू खोज्छन्, सामूहिक युद्धहरू र परिवारका स्क्वाब्सहरूलाई मार्दछन्। तर तिनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि तिनीहरू सबैले राम्रो र नराम्रो को रूपमा बुझ्छन् भनेर सहमत गर्न टाढा छन्।
यो एक dizzying गति छ र एक छ पुलिस तालिकाको भरपर्दो पोर्ट्रेट तिनीहरूको लामो घण्टा अफिसको काम वा सडक गस्तीको साथ। तिनीहरूले यसलाई १ 1972 .२ मा सिनेमामा अनुकूलन गरे र तिनीहरूले यसमा तारांकित गरे जर्ज सी। स्कट र स्टेसी केच।
यस पटक नायकहरू हो हलिउड सीमा देखि अधिकारीहरु। तिनीहरू दिनचर्याको माध्यमबाट जान्छन् प्रहरी सर्गेन्टको निगरानीमा ओरेकल उपनाम। तर त्यो दिनचर्या परिवर्तन हुनेछ जब स्पष्ट रूपमा असंबंधित घटनाहरूको शृंखलाले तिनीहरूलाई ल्याउँदछ सब भन्दा आश्चर्यजनक मामला हालका वर्षहरु मा भयो। तपाईंको रिजोलुसनले तपाईंलाई सम्झना गराउँछ कि लस एन्जलसमा डरलाग्दो र कट्टरपन्थको सीमा छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » थम्पसन र वम्बो, धेरै कालो क्लासिक्स ज्यादै तातो पतनको लागि
मेरा दुई नायकहरू ……… .. राम्रो रिपोर्ट
धन्यबाद। हामी नायकहरू साझेदारी गर्छौं।
फर्नांडो अरम्बुरु राष्ट्रिय कथा पुरस्कार २०१ "लाई" पत्रिका "को साथ